Canada Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi | Uhlu lwezinombolo Zomakhalekhukhwini | Database lakamuva
Canada Uhlu Lwezingcingo lwebhizinisi
Database lakamuva Lokuposa » Canada Uhlu Lwezingcingo lwebhizinisi
Izinombolo Zocingo Zebhizinisi LaseCanada
Uhlu lwefoni lwebhizinisi laseCanada lufake uhlu lwefoni lwebhizinisi le-125K. Sinikeza futhi, sibuyekeza futhi siqinisekise uhlu lwezinombolo zocingo. Uma uthuthukisa ibhizinisi lakho ngokubiza okubandayo nangomkhankaso we-SMS, khona-ke ukuxakaniseka kudinga uhlu lwezinombolo zefoni oluvumelekile.
Database Yemibhalo Yamuva inenye yezinkampani ezihlinzeka ngezinsizakalo zohlu lwezinombolo zocingo emhlabeni. Uma udinga ukuthuthukisa ithrafikhi eCanada, khona-ke ngohlu lwefoni yebhizinisi laseCanada kusuka lapha. Uma ufuna ukuthenga lolu hlu lwefoni lwebhizinisi laseCanada, bese uchofoza nje ukuthenga manje bese uthola uhlu lwakho lwezinombolo zocingo oluhlosiwe bese uqala ibhizinisi lakho.
Thenga eCanada Business Uhlu Lwezingcingo
Inani Lamarekhodi: 125K
UHLU LWEZIMALI LWECANADA LAMAHHALA
Uhlu lwezincwadi zeCanada lebhizinisi laseCanada, lenziwe ngendlela efanelekile equkethe imininingwane eqondile evunyelwe yabemukeli, ngenombolo yabo yocingo ye-sms, amagama webhizinisi, amadolobha namakhodi we-zip. Le nombolo yefoni yebhizinisi ihla kuhlu lwemininingwane eqondiswa kubemukeli abalungile njengoba kudingeka kuhanjwa ngocingo, ukumaketha nge-imeyili ngisho nemikhankaso yokubiza amakhaza.
Le database ikwenza ungabi namandla okuthola ithemba elidingekayo elingakusiza uthuthukise ibhizinisi lakho, i-database enobungani njengoba ungafunda futhi uthole ngendlela esheshayo. Inokuguquguquka okwakhelwe ngaphakathi kokuthi unciphise usesho lwakho futhi ubheke amathemba athile oyokwazi ukuwasebenzisa ekuthengeni izingcingo zakho, ukumaketha noma ukushaya amakhaza.
Uhlu lwefoni yebhizinisi laseCanada luqukethe imininingwane engu-125,000 ehlanganisiwe yedatha yebhizinisi yocingo efinyelela ku- $ 1,350, inkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engalandelwa ngokushesha engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Isihluthulelo sempumelelo ngohlu lwebhizinisi laseCanada ukusebenzisa zonke izinketho ezitholakalayo bese uhlela amathemba angaba khona. Hlunga futhi ubheke amathemba akho amahle okukhulisa ukuthengisa, isikhathi kanye nomzamo wokwenza ibhizinisi lakho litholwe kakhulu. Uhlu lwefoni yaseCanada lwebhizinisi lunganikeza futhi ibhizinisi lakho ngohlu oluqondiswe ngqo oluqinisekisa ukuthi uxhumeka namakhasimende akho okwamukela kakhulu.
Canada Business Ucingo Uhlu Umbuzo & Impendulo
Uhlu lwefeksi lebhizinisi lase-USA
Uhlu lwefeksi labathengi lase-USA
Uhlu lwefeksi lebhizinisi lase-UK
Uhlu lwefeksi lwabathengi base-UK
Uhlu lwefeksi lebhizinisi lase-Australia
Uhlu lweFeksi lwabathengi base-Australia
Uhlu lwefeksi lebhizinisi laseCanada
I-Canada Consumer Fax Uhlu
Uhlu lwefeksi lebhizinisi laseJalimane
Uhlu lwefeksi labathengi laseJalimane